पुजाको अर्को वर्ष बिहे ? भन्छिन् ‘जिवनमा कोहि आएको छ, तर त्यो आकाश होइन’ – Hamro24News
July 16, 2021 adminLeaveaComment on पुजाको अर्को वर्ष बिहे ? भन्छिन् ‘जिवनमा कोहि आएको छ, तर त्यो आकाश होइन’
अभिनेत्री पूजा शर्माले आफ्नो जीवनमा कोही विशेष व्यक्ति आएको खुलासा गरेकी छन् । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसँगको चिट च्याट कुराकानीमा उनले आफू मिंगल हुने तयारीमा रहेको खुलाएकी हुन् । एक फ्यानले ‘कसम सिंगल हो ?’ भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भनेकी छन्, ‘सिंगल पनि नभनिहालुम् । मेरो जीवनमा कोही आएको छ र उसलाई बुझ्दै छु । तर, त्यो व्यक्ति आकाश होइन ।’**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****